दुःखी विवाह: यी कुराहरू हस्तक्षेप विवाहित - भिडियो च्याट #1 - पूरा एक केटी वा केटा online!
दुःखी विवाह: यी कुराहरू हस्तक्षेप विवाहित
(वर्ष को लागि विवाहित)
के बन्द सुरु रूपमा एक ठूलो प्रेम मा परी कथा समाप्त हुन्छ, दुर्भाग्य, मात्र पनि, अक्सर एक हरर फिल्म । यो पुतलीहरु द्वारा उड, एक मानिस र एक महिला अलग बस्न, कम सेक्स र फसाउन, अचानक होलान्तर किन हो यति धेरै सम्बन्ध मा एक अलग. र हामी किन थाह, त्यसैले केही जोडे, जसले यो बनाउन चाहनुहुन्छ गर्न, धेरै वर्ष मात्र गर्न प्रत्येक अन्य । यो पुस्ता सम्बन्ध, हामी साँच्चै गर्न असमर्थ छ । हामी जान्न चाहन्थे, र संग बोलेको छ दुःखी विवाहित मानिसहरू । र यो थियो हडताली कसरी अक्सर तिनीहरूले बारम्बार, यी कुराहरू तिनीहरूले नियन्त्रण भन्दा महिला गरेको निराशा, तपाईं धेरै प्रेम गर्नुभयो । 'म तिमीलाई इच्छा थियो मलाई देख्न, हरेक दिन केहि मायालु. बरु, त्यो मलाई शाब्दिक संग कुराहरू म के गर्न आवश्यक, र सूची को के म बिर्सेका छन्. म छु त्यहाँ उभिरहेका एक मुर्ख ब्यक्ति जस्तै, र किन आश्चर्य म यहाँ छु, त्यसैले प्रारम्भिक घर आउन, म थाहा दैनिक थिएटर । थियो छोराछोरी को एक व्यस्त दिन ।. (दानियल, वर्ष को लागि विवाहित). 'छ भने तपाईं बस भेट, र प्रत्येक अन्य संग बाहिर चल्छ, यो छ त धेरै मजा छ । दुर्भाग्यवश, यो निकै कम हुन्छ भने, एक विवाह छ. जिम्मेवारी को दैनिक जीवन रोल एक बिट तला, संग प्रयोग गर्न प्रत्येक अन्य । बरु बाहिर जा, ओछ्यान मा बसिरहेका र टिभी हेरिरहेका. छ कि छैन कसरी, म कल्पना गर्न मेरो जीवनको बाँकी छ । (जनवरी, वर्ष को लागि, विवाह).
'किन त्यो छ छैन मलाई संग, अधिक रोमान्टिक छ । तपाईं गर्न चाहँदैनन् मलाई स्पर्श र सुत्ने मात्र अनिच्छा मलाई (पुरुष याद छैन जब आफ्नो पत्नी संग सही छ कुरा, र सेक्स बस चाँडै ल्याउन चाहनुहुन्छ).
म भावना छ कि यो अब त मलाई, पहिले जस्तै' भने । (दाऊद, वर्ष को लागि विवाहित). 'जब मेरो पत्नी र म भेट, त्यो ठूलो थियो, ओछ्यानमा मा लिएर मलाई आश्चर्य द्वारा निरन्तर नयाँ संग अद्यावधिक सेक्सी कुरा, र थियो धेरै प्रयोग गर्न छ । म पागल थियो । तर रूपमा चाँडै रूपमा, हामी विवाह गरेका थिए, कम छ, कडा रूपमा भने तपाईं चाहन्थे आकर्षित गर्न मलाई संग आफ्नो सारा आन्दोलन, र रूपमा चाँडै सबै काटियो र सुकेका, यो भएनन् गर्न सक्दो प्रयास'.
(लियोन, वर्ष को लागि विवाहित). गरिरहेको उनको पक्षमा द्वारा दिँदै तपाईं टिप्न र छनौट हामीले खाने के र कसरी हाम्रो घर छ सजाया छ । तर त्यो धेरै निराश भएको थियो, किनभने त्यो लाग्यो, केहि खान मात्र आफूलाई र नियमित अन्तराल मा पूर्ण'. 'त्यो निरन्तर छ । लगातार छ । कुनै कुरा के, म त्यो मा हरेक सानो कुरा हो । म गुना लाँड्री गलत बाटो र काटन प्याज एक मुर्ख ब्यक्ति जस्तै छ । अखिल खण्डहर, जब म बनाउन तला अन्डा, र । मलाई गरौं, कृपया, कम से कम, साथै तपाईं अवस्थित. 'यो छ, को जन्म भएकोले हाम्रो छोरी पूर्ण छ । म मेरो पत्नी प्रेम र साँच्चै गर्न चाहँदैनन् ध्वनि बाहिरको, तर यो एक साँच्चै उकालो दाँत, र फर्केर छ, दुर्भाग्य, कसैले जो, मानिसहरू वरिपरि बारी. (माइक, वर्ष को लागि विवाहित). 'छैन, निरन्तर भनेर म बुझ्न छैन, तपाईं र पटक एक दिन आफ्नो छाला मा खर्च गर्नुपर्छ. तर तिनीहरूले पनि छैन साँच्चै बुझ्न कठिन मलाई र मेरो समस्या छ । यो को बस एक कुरा हो, जो सही छ । र दुःखी । (फिलिप, वर्ष को लागि विवाहित). 'तपाईं कुरा गैर-स्टप छोराछोरीलाई बारेमा छ । स्कूल प्रदर्शन को यूहन्ना, वा खोकी को चासो हो मलाई पनि, एक प्रश्न छैन, तर म इच्छा लागि अधिक सामान्य कुराकानी बारे जीवन, छैन सिर्फ छोराछोरीलाई । पनि भने छोराछोरीलाई माथि बनाउन को एक ठूलो भाग आफ्नो दैनिक जीवन छ । (वर्ष को लागि विवाह). 'मेरो पत्नी साँच्चै विवाह गर्न आफ्नो काम छ । म खुसी छु, तपाईं को लागि कि त्यो प्रेम उनको काम त धेरै छ, तर त्यो ल्याउँछ यति धेरै काम घर कि म भावना छ कि तपाईं कहिल्यै साँच्चै मेरो लागि. नाटक मलाई सुन्न, म महसुस कि रोशनी मा छन् तर कसैले घर छ । त्यो कहिल्यै पूर्णतया त्यहाँ मेरो लागि, तर सधैं कहीं संग आफ्नो विचार. निराश मलाई । (लागि, लगभग एक वर्ष विवाह).
सेतो केटी भेट्न भारतीय. भारतीय डेटिङ
Tundmine, millel on ühine taani. Lugu-Meremaa. Taani
बिना विज्ञापन भिडियो च्याट को वर्ष बिना मुक्त लागि दर्ता अनलाइन भिडियो च्याट डेटिङ च्याट भिडियो च्याट भावनाहरु विवाहित महिला पूरा गर्न विज्ञापन अर्थोडक्स डेटिङ भिडियो डेटिङ प्रोफाइल फ्री भिडियो च्याट कोठा बिना दर्ता पूरा विवाहित